လူမှုမီဒီယာတန်းတူညီမျှမှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လာ | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, ဇွန်လ 2, 2011 ကြာသပတေးနေ့, အောက်တိုဘာလ 27, 2011 Douglas Karr
ဂယ်ရီ Vaynerchuck ငါအမြဲတမ်းနားထောင်ခြင်း၊ လိုက်နာခြင်းနှင့်သဘောတူခြင်းတို့ကိုရပ်တန့်ရန်ဆိုရှယ်မီဒီယာangelဝံဂေလိဆရာတစ် ဦး ဖြစ်လာသည်။ Bryan Elliott သည် မကြာသေးမီကဂယ်ရီကိုအပိုင်းနှစ်ပိုင်းဖြင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တိုင်းကိုအသေးစားမှအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အထိနားထောင်ရန်ကျွန်ုပ်အားပေးလိမ့်မည်။
အင်တာဗျူးတစ်ချက်ကကျွန်တော့်ကိုထိမိခဲ့တယ်၊ ငါအင်တာဗျူးမှာအဲဒါကိုအလေးထားလောက်အောင်မသေချာဘူး။ ဂယ်ရီကုမ္ပဏီများချပြီးအကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည် လူမှုမီဒီယာသို့သာတူညီမျှ။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအတွက်အမြတ်အစွန်းများရရှိရန်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသမားများနှင့်ကုမ္ပဏီများကမကြာခဏရှာဖွေနေကြသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုကွဲပြားစွာစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။
ဘလော့ဂ်ရေးတာဟာ Sprint မဟုတ်ဘူး၊ အခုကျွန်တော့်မှာဖောက်သည်တွေရှိတယ်၊ လတွေကြာပြီးနောက်၊ သူတို့ကစက်မှုလုပ်ငန်းထဲကတချို့သူတွေကြေညာနေတဲ့ကြီးမားတဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုမမြင်ရလို့ သို့သော်သူတို့သည်တိုးတက်မှုနှင့်အရှိန်အဟုန်ကိုမြင်တွေ့နေရသည်။ ထိုအရာသည်သူတို့၏အာရုံကိုကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်စေသည်။
၎င်းသည်သင်၏အငြိမ်းစားအကောင့်ထဲသို့ငွေထည့်ပြီးနှစ်နှစ်အတွင်းအနားယူရန်မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်တူသည်။ ဒါဖြစ်နိုင်မလား ငါနင်ပေါက်ကွဲနိုင်တဲ့စတော့ရှယ်ယာတစ်ခုထိဝင်မယ်လို့မင်းထင်တယ် .. ဒါပေမယ့်အခွင့်အလမ်းကဘာလဲ? အမှန်မှာ၊ တွစ်တာတိုင်း၊ ဘလော့ဂ်တိုင်း၊ Facebook တုန့်ပြန်မှုအားလုံးနှင့်သင်ရရှိသောနောက်ဆက်တွဲများသည်သင်၏စီးပွားရေးအနာဂတ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသေးငယ်သည်။ ချက်ချင်းပြင်ဆင်ချက်ရှာရန်မထွက်ပါနှင့်
သင့်ရဲ့အငြိမ်းစားအကောင့်လိုပဲ၊ ခေတ်ရေစီးကြောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးသူကလမ်းကြောင်းမှန်အတိုင်းသေချာအောင်သွားပါစေ။ သင်တစ် ဦး အောက်ပါကြီးထွားလာပါသလား သင်များစွာသောလူများထံရောက်ရှိနေပါသလား။ သငျသညျပိုပြီးဖျောပွ, ကြိုက်တယ်နှင့် retweets လာပြီလား ဤအရာများသည်သင်၏လူမှုမီဒီယာရှယ်ယာအကောင့်ထဲသို့အပ်နှံလိုက်သောနီကယ်များ၊
ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်နှစ်ခန့်ကစတင်ခဲ့ပြီးနေ့စဉ်နှင့်အမျှအပတ်စဉ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ တချို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကကျွန်တော့်လုပ်ငန်းဘယ်လောက်မြန်သလဲဆိုတာကိုအံ့သြနေကြတယ်။ Highbridgeကြီးထွားလာခဲ့သည် တစ်နှစ်ကျော်လောက်ငါတို့ရုံးခန်းဖွင့်ပြီးအချိန်ပြည့် (၁၈) လလောက်ကြာတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အချိန်ပြည့် ၀ န်ထမ်း ၃ ယောက်နှင့်အချိန်ပြည့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကုမ္ပဏီတစ်ဒါဇင်ကျော်ဖြင့်နေ့စဉ်ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်လုပ်နေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်နယူးဇီလန်၊ ဥရောပတစ်လွှားနှင့်မြောက်အမေရိကတစ်လျှောက်လုံးတွင်ဖောက်သည်များရှိသည်။
ငါကုမ္ပဏီကိုတစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာမတည်ဆောက်ခဲ့ဘူး။ ငါပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းကုမ္ပဏီတည်ဆောက်, နှင့်မတိုင်မီနောက်ထပ်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းအတွက်ကျွမ်းကျင်မှုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှင့်ငါ့အွန်လိုင်းအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ရှေ့မှာ ငါသည်ငါ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတံခါးကိုဖွင့်လှစ်! အောင်မြင်ရန်အရှိန်အဟုန်၊ စိတ်ရှည်မှု၊ နှိမ့်ချမှုနှင့်မရပ်မနားဖိအားများလိုအပ်သည်။
အကယ်၍ သင်၏ကုမ္ပဏီသည်နောက်ကျမည့်အစားစောစီးစွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါကသင်၏ကုမ္ပဏီသည်ခိုင်ခံ့မှုရှိပြီးသစ္စာရှိသောဖောက်သည်များနှင့်ပရိသတ်များရှိနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည်။ ယနေ့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်သာတူညီမျှမှုကိုစတင်ပါ။ ဂယ်ရီဖော်ပြသကဲ့သို့သတင်းစာများ၊ မဂ္ဂဇင်းများ၊ ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားများသို့ခေတ်မီမီဒီယာပြောင်းလဲမှုတိုင်းသည်လိုက်လျောညီထွေမရှိသောကုမ္ပဏီများကိုမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ သင်၏ကုမ္ပဏီမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်မဆုံးဖြတ်ပါကကောင်းပါသည်။ သင်၏ပြိုင်ဘက်များက
အန္တရာယ်ကနောက်ကျနေပြီ။ သင်သည်အသက် ၆၀ တွင်ချွေတာသောအခါ 65 တွင်အနားယူရန်ကြိုးစားခြင်းသည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ လူမှုမီဒီယာတွင်လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပြုပါ။ ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုကြည့်ရှုပုံ၊ လူမှုရေးအရထိခိုက်မှုကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းစျေးကွက်တွင်ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်ရေးကိုအခြေခံကျကျပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည် နက်ဖြန်။ ဒါ fad မဟုတ်ပါဘူး
သင့် Blog ၏သက်ဆိုင်ရာ Traff ည့်သည်များနှင့်သုံးဆတိုးပါ
ဇွန်လ 8 ရက် 2011 ခုနှစ် နံနက် 11 နာရီ 22 မိနစ်
ဒါက ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း ကျွန်တော် ခံစားခဲ့ရတဲ့ ပုံစံပါပဲ။ ဤအရာအပေါ် သင်၏အမြင်ကိုမြင်ရပြီး ဆိုရှယ်မီဒီယာကြိုးပမ်းမှုများသည် 'ယခုအခါ' အမျိုးအစားလေထုတွင်ပင် အချိန်ယူရကြောင်း အသိအမှတ်ပြုခြင်းသည် လန်းဆန်းစေသည်။
အမှန်တော့ ဒီစာကိုမဖတ်ခင်မှာ ကျွန်တော့်ရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေအကြောင်း ဘလော့ဂ်ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ မင်းရဲ့ပို့စ်ကိုဖတ်ပြီး ငါရေးထားတာကို ပြန်ဖတ်ကြည့်တော့ - "ဆိုရှယ်မီဒီယာကို ညွှန်ကြားခြင်းရဲ့ အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းက ချက်ခြင်းတုံ့ပြန်မှုကမ္ဘာမှာ ချက်ခြင်းရလဒ်တွေကို လိုချင်နေတယ်လို့ ငါထင်ပါတယ်။" (http://bit.ly/l5Enda).
Douglas ပို့စ်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ၎င်းကို အလွန်တန်ဖိုးထားပါသည်။
သြဂုတ်လ 1 ရက် 2012 ခုနှစ် 7:58 နာရီ
မင်းမှန်တယ်! အချို့သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ဆိုရှယ်မီဒီယာကို ကွဲပြားစွာ ရှုမြင်ကြသည်။ ဟုတ်တယ်၊ သင်စိုက်ထားတဲ့အရာကို ရိတ်သိမ်းဖို့ အားထုတ်မှုနဲ့ အချိန်အများကြီးလိုတယ်။